Kuzadza Nhabvu Grass
Tennis & Racetrack Huswa
"Yakare uye Yazvino" yeArtificial Grass
Muna Kubvumbi 1966, iyo Astrodome kuHouston, Texas, nhandare huru yemukati panguva iyoyo, yakamirira chinyararire kutanga kwebaseball baseball senguva dzose, asi mutsauko waivepo kuti pamberi pekutanga, Chemstrand akaisa chidimbu chekutanga chenyika panhandare ye baseball- ”Astrotu ...
Nyama yekugadzira iri pamoto, uye huswa hwekugadzira hwauya pano zvakare!
Kuseri kwekuodzwa mwoyo kweChinese nhabvu, iyo yekuChina yekugadzira turf indasitiri ndeyekunze-uye-kunze shasha yepasirose. Munguva pfupi yapfuura, Jiangsu Co-kugadzira Lawn, se "chikamu chekutanga cheyakagadzirwa turf" mumusika weA-share, yakwezva kutarisisa. Shell Investment Research yakawana kuti kunyangwe Chi ...
Ndezvipi zvinhu zvekugadzira turf zvinogona kushandiswa uye maitiro ekusarudza?
Yakagadzirwa turufu yakagadzirirwa uye kugadzirirwa kukanganisa kwehuswa hwepanyama. Natural turf inokanganiswa nemamiriro ekunze, manejimendi uye mamiriro ekudzivirira uye zvimwe zvinhu. Yakagadzirwa turufu ine iyo isinga tsindike mabhenefiti echisikigo turf. Chakagadzirwa turf haidi kushandisa zviwanikwa ...